မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဒေါက်တာဇာနည် အင်တာဗျူး | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်းနှင့် ဒေါက်တာဇာနည် အင်တာဗျူး
မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းနှင့် ဒေါက်တာဇာနည်အင်တာဗျူး, 28 Nov 2012
လက်ရှိမြန်မာ့နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေသည့်ပုံစံ၊ အရှေ့အနောက်အင်အားကြီးနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံ ရေး၊ မငြိမ်းချမ်းသေးသော မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းကိစ္စ၊ စိုးရိမ်စရာ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးအစရှိသည် တို့နှင့်ပတ်သက်ပြီး မော်ကွန်းမဂ္ဂဇင်းက မြန်မာ့ အရေးဝေဖန်သုံးသပ်သူ ဒေါက်တာဇာနည်ကိုအင်တာဗျူး ထားပါသည်။ ဒေါက်တာဇာနည်သည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ London School of Economics and Political Science မှ visiting သုတေသီတစ်ဦးပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်း၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး ရာတို့နှင့် ပတ်သက်လာပါကပြတ်ပြတ်သားသား၊ ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက်၊ စူးစူးရှရှ ဝေဖန်သုံးသပ်သူတစ်ဦးအဖြစ် လူသိများသူဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာမီဒီယာများတွင်လည်း ၄င်း၏ အတွေးအမြင်၊ သုံးသပ်ချက်များကိုရေး သားနေသူတစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။ Free Burma Coalition ကို တည်ထောင်ခဲ့သည့် ဒေါက်တာဇာနည် (maungzarni.com) သည် စစ်အစိုးရနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံကြရန် အစဉ်တစိုက်အရေးဆိုခဲ့သူအနည်းစုထဲ တွင်ပါဝင်ပြီး သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အစောပိုင်းကာလအထိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်များနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူဖြစ် သည်။ “Knowledge, Control and Power: The Politics of Military Rule in Burma Under General Ne Win (1962-88).” စာတမ်းဖြင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ Wisconsin တက္ကသိုလ်မှ ဒေါက်တာဘွဲ့ရရှိခဲ့သည့် ဒေါက်တာဇာနည်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ် ပြင်းထန်နေသည့်အပေါ် အတော်ကို စိုးရိမ်သူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် မြန်မာများ အကဲ့ရဲ့မခံရစေရေး မည်သို့လုပ်သင့်သည်ကို ယခုအင်တာဗျူး၌ အကြံပြုဆွေးနွေးထားပါသည်။
Dr. Zarni: ခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင် ရှေ့ဆက်သွားဖို့ အလားအလာတော့ရှိတယ်။ နောက်ဆုတ်ဖို့ကတော့ တော်တော်လေး ခက်သွားမယ်။ တပ်ထဲကခေါင်းဆောင်တွေကလည်း သဘောပေါက်မှာပေါ့ – နောက်ပြန် သွားလို့မရဘူးဆိုတာ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စစ်တပ်က အုပ်ချုပ်ခဲ့တာ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်မှာ တိုင်းပြည်ဟာ ချွတ်ခြုံကျသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ကနေပြီး မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ (ပြည်ထောင်စု) ၀န်ကြီးဦးစိုးသိန်းတို့ နယူးယောက်မှာ ပြောတဲ့ဟာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ဗမာပြည်မှာ ကောင်းတာဘာမှ မရှိတော့ဘူး၊ ဘယ်နေရာပဲကြည့်ကြည့် သုံးမရတော့ဘူးဆိုတာကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဗမာလိုပြောသွားတယ်လေ။ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ စိတ်ဓာတ် အကုန်လုံးကျနေတာ။
Dr. Zarni: တရုတ်၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်နဲ့ အိန္ဒိယ အဲဒီ အင်အားစုလေးစုနဲ့ ဥရောပသမဂ္ဂ ကျွန်တော်တို့ ဆီကိုလာပြီးတော့ သူတို့ အကြံနဲ့သူတို့၊ သူတို့အကျိုးစီးပွားနဲ့ သူတို့ ပြန်ဝင်လာကြတယ်။ ဒီပြန်ဝင်လာတဲ့ အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာ နိုင်ငံရေးအခံ၊ အတွေးအမြင်၊ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကိုယ်ခံမရှိဘူး၊ တိုးတက်မလာဘူးဆိုရင်တော့ ရှေ့လျှောက်မှာ ကောင်းတဲ့ အပိုင်းရှိသလို၊ ပိုပြီးတော့လည်းဆိုးလာနိုင် တယ်လို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ဦးနေ၀င်းခေတ်မှာ နေခဲ့ရတဲ့ အနေအထားမျိုးထက် အဆပေါင်းများစွာ ဆိုးနိုင်တဲ့အနေအထားရှိတယ်။
ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့ နိုင်ငံရေးကစားတဲ့၊ စီးပွားရေးကစားတဲ့ အကျိုးအမြတ်ထုတ်တဲ့လူတွေက အရမ်းများ လာတယ်။ အဲတော့ ဒီတစ်ခါ တိုင်းပြည်မှာခေါင်းဆောင်မှု အသုံးမကျရင်တော့ ဒုတိယအခွင့်အလမ်းပြန်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ ဆိုလိုတာက တစ်စစီကို စုတ်ပြတ်သွားမယ့် အနေအထားမျိုးမြင်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီကို တရုတ်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အမေရိကန်ပြန်ဝင်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အင်္ဂလိပ်က ပြန်ဝင်လာတာပဲဖြစ် ဖြစ်၊ ဂျပန်ကလာတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကူအညီပေးတဲ့အခါ လူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီ ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ငွေသန်းကိုရာနဲ့ချီပြီးပေးမယ်။ ဒါတွေက တကယ်တန်းပြောရင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ပြည်သူအများစု ချွတ်ခြုံကျနေတဲ့အခါဆိုတော့၊ ပြာပုံပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ အခြေ အနေမျိုးမှာဆိုတော့ ဒေါ်လာတစ်သန်းပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်သောင်းပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်သိန်းပဲဖြစ်ဖြစ် ကမ္ဘာ့ဘဏ် တို့၊ အင်္ဂလန်တို့ကပေးတဲ့ အခါမှာ အားလုံးက၀မ်းလည်းသာတယ်၊ ကျေးဇူးလည်းတင်ကြတယ်။
MAWKUN: ပြည်တွင်းမှာ တရုတ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွားက အမြောက်အမြားပဲ။ အတော်များများ ကတော့ စစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက နှစ်ဘက်အစိုးရ သဘောတူညီမှုတွေနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ။ အဲဒီအထဲက တချို့ လုပ်ငန်း တွေကို ဒေသခံတွေက အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်မခံလိုကြဘူး။ ဥပမာ – လက်ပံတောင်းတောင်ကိစ္စလိုဟာမျိုးပေါ့။ အဲတော့ နောက်ထပ်ကော ဘယ်လို အခင်းအကျင်းတွေကို မြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိလဲ။
Dr. Zarni: အရင်က စီမံကိန်းတွေဆွဲပြီးတော့ တရုတ်နဲ့ပဲ လက်မှတ်ထိုးထိုး၊ တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ပဲ ထိုးထိုး ပြည်သူက ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားတွေက လုပ်သွားခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်တို့လက်ထက်ကတည်းက တရုတ်နဲ့ တအားရောပြီး အထက်ဗမာပြည်တစ်ခုလုံးမှာ ဗမာ စကားကို တစ်ခွန်းမှ မပြောတတ်တဲ့ ယူနန်ဘက်ကသူတွေကို မှတ်ပုံတင်တွေ ထုတ်ပေးတာတွေ လုပ်လာခဲ့ ကြတယ်။
လောလောဆယ် လူတွေသိနေကြတာက ရိုဟင်ဂျာတွေကို နှင်ဖို့လောက်ပဲပြောနေကြပေမဲ့ သူတို့က ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက် အဓိကအန္တရာယ်မဟုတ်ဘူး။ တကယ်က အထက်ဗမာပြည်တစ်ခုလုံး၊ အဓိက မန္တလေးမှာ တရုတ်ရဲ့စီးပွားရေးတွေရှိတယ်။ သူတို့က မြေတွေကို လိုက်ဝယ်တယ်။ လူမှုရေး ကိစ္စတွေမှာပါ တော်တော်လေးဝင်ပြီး လွှမ်းမိုးတဲ့ သဘောမှာရှိတယ်။ စီးပွားရေးတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူး။ တကယ် တိုင်းပြည်မှာအန္တရာယ်ရှိတာက တရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့ အကျိုးစီးပွားတွေက ကျွန်တော်တို့အထက်ဗမာပြည် ကြီးကို မျိုလိုက်တာ။ အဲဒါက ကျွန်တော်တို့တွေအတွက် ပိုပြီးတော့ ကြောက်စရာကောင်းတယ်။ အဲဒါကို အဓိကထားပြီးတော့ စဉ်းစားဖို့ကောင်းတယ်။
မြေနိမ့်ရာလှံစိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး၊ ဘင်္ဂါလီကိုရှင်းလိုက်၊ နိုင်ငံက နှင်ထုတ်လိုက်တို့ဆိုတာတွေက တလွဲဆံပင် ကောင်းပြီးတော့ ဖက်ဆစ်ဆန်ဆန်တွေဖြစ်နေကြတယ်။ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုများနေတာ။ တကယ်တန်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေးတွေကို ခြိမ်းခြောက်နေတာက အထက်ဗမာပြည်ကိုမျိုသွားတဲ့ တရုတ်ရဲ့ အကျိုးစီးပွား အဆက်အနွယ်တွေပဲ။ ဒါကိုကျွန်တော်တို့က အဓိကထားပြီး လုပ်မှရမယ်။
MAWKUN: ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေတော့ လုပ်နေတယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကချင်ပြည်နယ်မှာ စစ်ပွဲ တွေက အခုထိဖြစ်နေတုန်း။ KIA နဲ့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ အခုထိ ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်သေးတဲ့ နောက် ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအချက်တွေရှိမလဲဗျ။
ကြေးစင်တောင်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် လယ်သမားတွေဟာ ထောင်နဲ့ သောင်းနဲ့ချီပြီး ဒုက္ခရောက် ကြတယ်ဆိုတော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေက ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ လူအများစုအတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ က အကျိုးမရှိတဲ့အပြင် အကျိုးတောင်ယုတ်တယ်လို့ လက်ရှိအနေအထားအရ မြင်နေရတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်တဲ့ကာလကို ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အလွန်ကိုသံသယရှိတယ်။
Dr. Zarni: နော်ဝေက ဗမာပြည်ထဲကို ၀င်လာတာက ရှင်းရှင်းလေး။ နော်ဝေ ၀င်လိုက်တဲ့ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ငြိမ်းချမ်းရေး ပီပီပြင်ပြင်ရသွားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူး။ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ အစ္စရေးကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ၁၉၉၅ မှာ ပါလက်စတိုင်း ခေါင်းဆောင် ရာဆာအာရာဖတ်နဲ့ အစ္စရေးဝန်ကြီးချုပ်တို့နဲ့ အော်စလိုငြိမ်း ချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲဆိုပြီးတော့ နော်ဝေက လုပ်တယ်။ စာချုပ်တချို့ ချုပ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့အထိ အစ္စရေးနဲ့ ပါလက်စတိုင်းနဲ့ ဂါဇာမှာချနေတုန်းပဲ။ ဆိုလိုတာက အော်စလို (နော်ဝေ) ၀င်လုပ်လိုက်လို့ အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာ ငြိမ်းချမ်းရေးရသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။
နော်ဝေကလည်း ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံပဲ။ ငြိမ်းချမ်းရေးသိုင်းကွက် နင်းပြီး ၀င်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူသားကယ်တင်ရေး၊ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးအတွက်ဆိုပြီးတော့ သိုင်းကွက်နင်းလာ တာပဲဖြစ်ဖြစ် ၀င်လာတာအားလုံးကတော့ (နော်ဝေ ၀င်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ၀ါရှင်တန်(အမေရိကန်) ၀င်လာတာပဲဖြစ်ဖြစ်) အလှူပေးဖို့လာတာမဟုတ်ဘူး။ အကျိုး အမြတ်ရဖို့အတွက်လာတာ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေအနေနဲ့ သိဖို့ရာက နိုင်ငံခြားက ၀င်လာတယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးသမားပဲဝင်ဝင်၊ နိုင်ငံရေးသမားပဲဝင်ဝင်၊ ဘယ်သမ္မတပဲလာလာ သူတို့အကျိုး စီးပွားအတွက်လာတာ။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံကြီး လမ်းပွင့်သွားဖို့တို့၊ ကျုပ်တို့နိုင်ငံကလူတွေ ထမင်းနပ်မှန်အောင် စားဖို့တို့၊ ရှေ့မှာစီးပွားရေးတွေ ကောင်းလာဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး မှာ တစ်နပ်မှ အလကားစားရတဲ့ထမင်း၊ တစ်ခွက်မှ အလကားသောက်ရတဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုတာမရှိဘူး။ ကျုပ်တို့ကို ချစ်လို့လာတာ တစ်ကောင်မှမရှိဘူး။
Dr. Zarni: အစိုးရက နောက်ကွယ်မှာပါတဲ့အနေအထားလို့ ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတယ်။ မေလထဲမှာ ရခိုင်အမျိုးသမီး ဗလက္ကာရအလုပ်ခံရပြီး အသတ်ခံရတယ်။ နောက်ဗမာ သတင်းစာတွေထဲမှာပါတာက လည်း ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို မူဆလင်ဘာသာဝင်သုံးယောက်က ဗလက္ကာရကျင့်ပြီး တော့ ရက်ရက်စက်စက် သတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါတယ်။
ရခိုင်တွေနဲ့ မူဆလင်တွေနဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းရှိတယ်။ ကျောက်နီမော်လို နေရာမျိုးကိုကြည့်လိုက်။ ဆွေစဉ် မျိုးဆက်နေလာတာ။ ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ ရခိုင်ဗုဒ္ဓ ဘာသာတွေနဲ့ မူဆလင်တွေ – ဘင်္ဂါလီပဲခေါ်ခေါ်၊ ရိုဟင်ဂျာပဲခေါ်ခေါ် – တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ရိုက်နေကြတာ၊ ခုတ်နေကြတာမရှိခဲ့ဘူး။ အဲလိုအနေအထားမျိုးမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရက်ရက် စက်စက်လုပ်လာကြအောင် ဘယ်သူကနှပ်ကြောင်းပေးလိုက်တာလဲ။ အဲဒီနှပ်ကြောင်းပေးလိုက်တဲ့အထဲမှာ အစိုးရကဘယ် အတိုင်းအတာထိပါသလဲ။
နောက်စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ဖွဲ့တဲ့အခါမှာ ဦးသိန်းစိန်က ကုလသမဂ္ဂကို မိန့်ခွန်းပြောတဲ့အခါမှာ ဒီ၂၇ ယောက်ဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့မျက်နှာဖုံးတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ ဒါပေမဲ့ စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကို ပထမဆုံး ဖွဲ့တဲ့နေ့ကတည်းက အစိုးရကဘာမှ ပီပီပြင်ပြင် အကူအညီမပေးခဲ့ဘူး။ ရုံးလည်းမပေးခဲ့ဘူး။ ငွေလည်းမပေး ခဲ့ဘူး။ တောင်းဆိုထားကြတဲ့ လုံခြုံရေးအရာရှိတွေနဲ့လည်း ပီပီပြင်ပြင်တွေ့ခွင့်မပေးဘူး။ စုံစမ်းစစ်ဆေး ရေးကော်မရှင်ကြီးက အခုကျတော့ကိုဇာဂနာတို့၊ ကိုအောင်နိုင်ဦးတို့၊ နောက်တစ်ခါ ဒေါက်တာအန်ဒရူး ဆိုတဲ့ ချင်းလူမျိုးဥပဒေ ပညာရှင်တို့ဟာ ဘာမှ ပီပီပြင်ပြင်လုပ်နိုင်တဲ့ အနေအထားမျိုးမရှိတော့ဘူး။ နောက် တစ်ခုက စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာက အနောက်ကဖိအားတွေ ၀င်မလာအောင်လုပ်တာဖြစ်မယ်။
ဒီလူမျိုးရေးပြဿနာက အစိုးရဘက်က တစ်နည်းတစ်ဖုံနဲ့ နိုင်ငံရေးကိုကစားတာလို့ ကျွန်တော်မြင်တယ်။ ကျွန်တော်အပြင်ကနေပြီးတော့ သားပုပ်လေလွှင့် စွပ်စွဲတာ မဟုတ်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ ရှိရင် လူမျိုးရေး အရေးအခင်းစဖြစ်ကတည်းက သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ စကားတွေက လေး၊ ငါးခါလောက် အမျိုးမျိုး စကားလမ်းကြောင်းတွေက ပြောင်းသွားတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ ဒီဘင်္ဂါလီတွေဟာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဟာတွေ မဟုတ်ပါ ဘူး။ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာတဲ့သူတွေပါ။ သူတို့ကို တခြားနိုင်ငံကို ပို့ချင်ပို့၊ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း တစ်နေရာမှာ ဒုက္ခသည်စခန်းဆောက်ပြီး တော့ UN က ကျွေးထားပါလို့ပြောတယ်။
နောက်တစ်ခါ VOA နဲ့ အင်တာဗျူးတဲ့အခါကျတော့ လေသံကပြောင်းသွားတယ်။ မဟုတ်ဘူးတဲ့၊ ကျွန်တော် တို့ စစ်ဆေးပြီးပါပြီတဲ့။ အများစုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာရှိပြီးသား၊ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံသားတွေ ပါတဲ့။ နောက်မှဝင်လာတဲ့လူက အလွန်နည်းပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်။
ကျွန်တော်ပြောချင်တာက သမ္မတလို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတောင်မျိုးစုံပေါ့ဗျာ။ ဒီကွေ့မှာဒီတက်နဲ့လှော်ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး နဲ့။
အဲဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ နေပြည်တော်က မရိုးမသားနဲ့ ၀င်ပြီးတော့ ပါတယ်လို့ ထင်တယ်။ ၁၉၆၇ မှာလည်း တရုတ်-ဗမာအရေးအခင်းကိုသူတို့ ဖန်တီးခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုးပေါ့ဗျာ။ သမ္မတ အကြံပေးလုပ်နေတဲ့ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်ကတောင်မှ သူစာရေးထားတဲ့အထဲမှာရှိပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ် ခင်ညွှန့်တို့ပြုတ်သွားပြီးတဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ မူဆလင်အရေးအခင်းကို ဖန်တီးဖို့ ထောက်လှမ်းရေးဘက်က လုပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတွေ။ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင် ကိုယ်တိုင်ကရေးထားတာဆိုတော့ နေပြည်တော်က လူတွေကို ကျွန်တော်က လုံးဝအယုံအကြည်ကိုမရှိဘူး။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နေလို့ မရဘူးဆိုတာက ၀င်ပြီးတော့တွန်းကြတာပေါ့ဗျာ။ ရခိုင်တွေအားလုံးနဲ့ မူဆလင်တွေအကုန်လုံး ဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းတဲ့ရခိုင်တွေအများကြီးရှိတယ်။ ဆိုးတဲ့ရိုဟင်ဂျာ တွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ကောင်းတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေလည်းရှိတယ်။ ဆိုးတဲ့ ရခိုင်တွေလည်းရှိတယ်။ ဖြစ်ခဲ့တာတွေက အလွန်ကို ၀မ်းနည်းစရာကောင်းတယ်။
Dr. Zarni: ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသားပဲဖြစ်ဖြစ်၊ နောက်ဆုံး ဒီရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပြည်ပမှာနေတဲ့ လူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေးကို တစ်ချိန်လုံးတောင်းဆိုပြီးတော့ထောက်ခံပြီးတော့၊ ဘာသာစုံမေတ္တာပို့ပြီးတော့နေခဲ့ကြတာ။ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ပါစေဆိုပြီးတော့ သူ့ပုံကို အင်္ကျီမှာရိုက်ပြီးဝတ်တဲ့သူလည်းရှိတယ်။ ဘုရားစင်မှာကပ်ထားတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ အားလုံးက သူ့ဘက်မှာ မားမားမတ်မတ်ရပ်တည်လာကြတယ်။
သူလွတ်လာပြီးတော့ အစိုးရကသူ့ကိုနိုင်ငံရေးအရ လူရာသွင်းတဲ့အချိန်၊ အနောက်နိုင်ငံကခေါင်းဆောင် တွေနဲ့ ဆက်ဆံပြီး သူ့ကိုတစ်ကမ္ဘာလုံးက လေးလေးစားစား ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ လူမျိုးစုတွေရဲ့အမြင်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ မတူတာက သူတို့တတွေ ဒုက္ခရောက်ပြီး မိုးထဲရေထဲ ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူနဲ့မဆိုင်သလိုနေတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနှစ်ဘက် စလုံးက တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သတ်နေဖြတ်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ တစ်ဘက်ကိုဝင်ပြီးတော့ မားမား မတ်မတ်ရပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် အဲဒီတစ်ဘက်ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုရာကျမှာစိုးလို့ ရှောင်တယ်ပေါ့ ဗျာ။
ဒါပေမဲ့ ကချင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာက ကချင်တွေကနေပြည်တော်ကိုဝင်တိုက်၊ မန္တလေးကိုသိမ်း၊ လားရှိုး ကိုသိမ်း၊ ရန်ကုန်ကိုတိုက်မယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ အခုဖြစ်နေတာက ဗမာ့တပ်မတော်က ကချင်တွေရဲ့မြေကိုသွားပြီး သယံဇာတတွေကို သိမ်းကျုံးပြီးတော့ယူဖို့၊ နောက်တစ်ခါ တရုတ် ပြည်ရဲ့သဘာဝဓာတ်ငွေ့နဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းကိုလုံခြုံမှုရှိဖို့၊ နောက်ပြီးတော့သူတို့ဆီမှာရှိတဲ့ ကုန်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းတွေကိုဝင်ပြီးထိန်းချုပ်ဖို့၊ နောက်တစ်ခါ KIA ကို ဒူးထောက်အောင် လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ စစ်တပ် က ဟိုဘက်မှာရှိတဲ့၊ သူ့နေရာသူနေနေတဲ့ ကချင်တပ်ကိုကျူးကျော် စစ်လိုတိုက်နေတာ။
ဗမာစစ်တပ်က ကချင်ပြည်နယ်ကိုသွားပြီးတော့ တရားမျှတတဲ့၊ နိုင်ငံတော်အတွက်တိုက်နေတဲ့ စစ်မဟုတ် ဘူး။ ကချင်တပ်က ကျွန်တော်တို့တော့ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာမနေတော့ဘူးဆိုပြီး ခွဲထွက်ရေးအတွက် တိုက်နေ တာမဟုတ်ဘူး။ အဲလိုအနေအထားမျိုးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် စစ်တိုက်နေ တဲ့အချိန်မှာ ဘယ်ဘက်မှာမှဝင် မပါချင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ ကချင်ဘက်က ခံစားကြရတာက ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည်က သူတို့ကိုလုံးဝ သံယောဇဉ်မရှိဘူး၊ နောက် solidarity (သွေးစည်းတဲ့ အနေအထားမျိုး) မရှိ ဘူးလို့ ခံစားရတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလွတ်လာတဲ့အခါမှာ ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့တိုင်းပြည်အတွက် ဒီအချိန်ထိ လုပ်ပေးခဲ့တာက နည်းပြီးတော့ ဦးသိန်းစိန်တို့အစိုးရအတွက် အကျိုးဖြစ်တဲ့ အလုပ်တွေကိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်ကလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်က အဲလိုပဲသုံးသပ်တယ်။
ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာဆိုရင် ကြံ့ဖွံ့ကော၊ NLD ကော၊ တခြားပါတီတွေကော အားလုံးပေါင်းပြီး ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းရဖို့ဆိုတာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ အဲလိုမဖြစ်နိုင်တာတင်မကသေးဘူး။ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းမဖြစ်နိုင်တဲ့ ဟာက ဖြစ်လာခဲ့ရင်တောင်မှတပ်က တစ်မဲကဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ စစ်တပ်က ၀င်ထိုင်တဲ့ စစ်ဗိုလ်အရာ ရှိတွေက ပါလီမန်အမတ်အရေခြုံထားတာပဲရှိတယ်။ စစ်သားဆိုတာက အထက်ကလာတဲ့အမိန့်ကိုပဲနာခံ မှာ။ အထက်ကဒါတွေကို လက်မခံနဲ့ဆိုရင်အရပ်သားတွေနဲ့ ပေါင်းပြီး မဲထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်ခု က စစ်တပ်က လိုလိုလားလားနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ဖို့က သူ့မှာ (မြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့) သားနှစ်ယောက်ရှိနေတယ်။ သမ္မတဖြစ်ဖို့ အလားအလာဟာ စစ်တပ်ပေါ်မှာအရမ်းမူတည်တယ်။
ဟစ်တလာလက်ထက်ကလို ဂျူးတွေကို အကုန်လုံး မောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး လူမျိုးစိတ်ဓာတ် တွေပြင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၀င်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူကိုပညာ ပေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာ သူ့ဆီကတစ်လုံးမှထွက်မလာဘူး။ ပြည်သူကိုပညာပေး ရမယ့် အခြေအနေမျိုးရောက်လာတဲ့ အနေအထားမှာ တစ်ဘက်နဲ့တစ်ဘက် ရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ဘေး မှာနေမယ်ဆိုတဲ့ ကြားနေနေတဲ့အခါကျတော့ လုံးဝကိုအရုပ်ဆိုးတယ်။ အဲတော့ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ လက်ရှိကမ္ဘာထဲမှာပြန်ပြီး ၀င်တဲ့အခါကျတော့ လူမျိုးရေးစိတ်ဓာတ် သိပ်ပြင်းထန်တာမျိုး၊ သွေးကစကားပြောတယ်တို့နဲ့ သွားမရဘူး။
ရခိုင်မှာ ဒီမိုကရေစီနည်း စပြီးကျင့်သုံးပြီးတော့ ရခိုင်ပြည်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင် ဆန်းစုကြည် အပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေ အကုန်လုံးက ရခိုင်ပြည်ကို စစ်တပ်တွေ အကုန်ပို့ပါဆိုတဲ့ အနေအထားမျိုးကို ရောက်လာတယ်။ အဲတော့ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆိုတာက စစ်တပ်ရဲ့ကဏ္ဍ တဖြည်းဖြည်း မှိန်သွားပြီးတော့ ပြည်သူတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ရှေ့ကို တက်လာရမယ့်အခါမှာ ကျွန်တော်တို့က စစ်တပ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကို ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကတောင်မှ လိုလိုလားလားတောင်းဆိုနေတဲ့ အနေအထား ရောက်နေတယ်ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ အရပြောမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအရ ဆုတ်ကပ်ထဲကိုရောက်နေတယ်။ ရှေ့ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားကြဖို့ လိုလိမ့်မယ်။
ဂေါတမကိုးကွယ်၊ ကိုးကွယ်၊ ဂျေးဆပ်ခရိုက်စ်ကို ကိုးကွယ်ကိုးကွယ်၊ သို့မဟုတ် အလ္လာကိုးကွယ်၊ ကိုးကွယ် – ကြိုက်တာကိုးကွယ်။ အဲဒါနိုင်ငံတော်နဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဘာသာရေး ဆိုတဲ့ဟာက ကျွန်တော်တို့တတွေတစ်ဦးချင်းစီရဲ့ ယုံကြည်မှုအနေနဲ့ ဆက်ထားရမယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် သည်းခံဖို့တင်မဟုတ်ဘူးဗျ။ အလ္လာကိုပဲကိုးကွယ်၊ ကိုးကွယ်၊ ဗုဒ္ဓကိုပဲကိုးကွယ် ကိုးကွယ်၊ သခင်ရေရှုကိုးကွယ်၊ ကိုးကွယ် လေးစားရမယ်။ နောက်ပြီး သွေးစကားပေါ့။ လူမျိုးရေးဆိုရာမှာ သွေးဆိုတဲ့ စကားကိုဆွဲထုတ်ပြစ်မှရမယ်။ နာဇီဂျာမနီရဲ့ အယူအဆကို သက္ကရာဇ် ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ လက်ခံ မယ်ဆိုလို့ရှိရင် အလွန်ဆုံးရှုံးတယ်။ ခေတ်နဲ့လည်းမလျော်ညီဘူး။ တိုင်းပြည်လည်းကမောက်ကမဖြစ်ပြီး ယူဂို စလားဗီးယားနိုင်ငံလိုကွဲမယ့် အိုက်ဒီယိုလော်ဂျီ အမြင်ဖြစ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကို တစ်ကမ္ဘာလုံးကကြည့်နေတာက မူဆလင်တွေကို သတ်ဖြတ်နေတယ်၊ ရိုဟင်ဂျာတွေ ကိုသတ်ဖြတ်နေတယ်၊ အနိုင်ကျင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ကိုယ့်နိုင်ငံသားတွေကို ဒီလိုမျိုး အကြည့်ခံရတယ် ဆိုတာစိတ်လည်းမကောင်းဘူး။ ကိုယ်လည်းဝင်ပြောမိတယ်။ တစ်ကမ္ဘာလုံးကယဉ်ကျေးမှုရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေက ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုလက်ရှိကြည့်နေတာက အော့ကြောလန်တဲ့မျက်လုံးနဲ့ ကြည့်နေတာ။
ကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေက အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဆိုးတဲ့လူတွေကရှေ့တန်းကိုထွက်ပြီးတော့ ဖက်ဆစ် အယူဝါဒတွေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကောင်းတဲ့ပြည်သူတွေက လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး ကြောက်ပြီး ငြိမ်နေ ကြတယ်။ အဲဒီအနေအထားကို ပြောင်းမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ရှေ့ကိုတက်မယ်။ မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ စီးပွားရေးမြှုပ်နှံမှု ဘီလီယျံထောင်နဲ့ချီ လာလာ၊ သမ္မတအိုဘားမားပဲလာလာ အကြံလာပေးမယ်ဆိုရင် တောင် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက ကောင်းဖို့အလား အလာမရှိနိုင်ဘူး။
ဗမာပြည်လို တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံရှိနေတဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှာ အမျိုးသားရေး အမြင်သစ်တစ်ခုလိုကို လိုအပ်တယ်။ ပြီးတော့ ဗမာဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေကိုခေါ်တာလဲ၊ မျိုးချစ်တဲ့သူဆိုတာ ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတဲ့ဟာလည်း လိုအပ်တယ်။ ဗမာဆိုတဲ့အဓိပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အသစ်ဟာ “သွေး”တို့၊ ဘာသာရေးကိုအခြေပြုတဲ့ “ဗမာ-ဗုဒ္ဓဘာသာ”၊ “တိုင်းရင်းသား”ဆိုတဲ့ အယူအဆဟောင်းကနေ လမ်းခွဲ ထွက်ရမယ်။ ဗမာပြည်သစ်မှာ ဗမာနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာဗမာပြည်တွင်းရှိတဲ့ တခြားသူတွေထက် ပိုပြီးသာတူညီမျှရှိတဲ့လူတွေအဖြစ်မခံစားစေရဘူး။ ဗမာသစ်ဆိုတာဟာကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ၊ နိုင်ငံရေး အမြင်၊ ပရက်ဖဲရှင်နယ်နောက်ခံအကြောင်းတရားတွေကို ဘေးဖယ်ပြီးတော့ ယဉ်ကျေးမှုစုံဝါဒနဲ့ အများ ပြည်သူလူထုနဲ့ဆိုင်တဲ့မျိုးချစ်စိတ်တွေရှိရမယ်။ စစ်သားနဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေသာ စစ်မှန်တဲ့မျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်တယ်၊ နိုင်ငံသားတွေကတော့ သူတို့ လောက်မျိုးချစ်စိတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့ စစ်တပ်ရဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ဗမာ သစ်က ထာဝရဖယ်ခွာနိုင်ရမယ်။
“ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး ရှေးရှုပေးပါ” ဦးဝဏ္ဏရွှေနှင့် မဇ္စျိမ အင်တာဗျူး (Nov 1, 2012)
“ရိုဟင်ဂျာ/ဘင်္ဂါလီမဟုတ်ဘူး ကျနော်တို့ ကမန်တွေပါ” ကျောက်နီမော်ရွာသားနှင့် RFA Interview (Oct 31, 2012)
ရခိုင်ပြဿနာမှာ မြန်မာပြည်၏ အရိုးစွဲလူမျိုးရေး ခွဲခြားမှုဖြစ်ကြောင်းပညာရှင် (Oct 28, 2012)
“အပြစ်မဲ့ ပြည်သူတွေ သေနေတာ ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတယ်” (Oct 25, 2012)
စစ်တွေတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရသော ကိုရှိုင်းမင်း နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (၃) (Sep 17, 2012)
စစ်တွေတွင် အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်ခံရသော ကိုရှိုင်းမင်း နှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (၁+၂) (Sep 16, 2012)
ရခိုင်အရေးအခင်း ရိုဟင်ဂျာမိသားစုများနှင့် အင်တာဗျူး (Jul 4, 2012)
“ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်ဖို့ နောက်ကွယ် ပယောဂ ရှာဖို့လိုတယ်” (Jun 26, 2012)
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ကိုမြအေးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (Jun 6, 2012)
This entry was posted on January 5, 2013, in အင်တာဗျူး, နိုင်ငံတကာသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← 04.01.2013 လွတ်လပ်ရေးနေ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့် ခွန်း
သမိုင်းဟူသည် ဤသို့တည်-၇ [ထေရဝါဒ အိန္ဒိယက ကွယ်ရခြင်း တရားခံ- ဘုန်းတော်ကြီးများကိုလေးစားပါ ] →